ICetilistat (282526-98-1) Ifektri yokwenziwa kwabahlinzeki
I-CMOAPI inebanga eligcwele lezinto zokusetshenziswa zeCetilistat, futhi inesistimu ephelele yokuphathwa kwekhwalithi.
Cetilistat powder Ulwazi oluyisisekelo
Igama I-Cetilistat powder
Ukubukeka Powder Grey
isisindo Yamamolekhula 316.31 g / mol
Melt Point I-190-200 ° C
Formula Yamamolekhula C25H39NO3
Isitoreji Temp Ukushisa kwamakamelo
ICetilistat (i-CAS no.282526-98-1) eyaziwa nangokuthi i-ATL-962, i-ATL 962 noma i-Citilistat yisidakamizwa esiboniswe ekwelapheni ukukhuluphala. Isetshenziselwa ikhalori eliphansi, ukudla okunamafutha amancane, nokuvivinya umzimba okufanele ukusiza ekwehliseni isisindo.
Umuthi wokulwa nokukhuluphala we-cetilistat uthengiswa ngaphansi kwamagama emikhiqizo ehlukene kufaka phakathi Cetislim, I-Kilfat, Oblean, kanye ne-Checkwt.
I-Cetilistat iyi-benzoxazine, i-gastrointestinal lipase inhibitor esebenza ngokuyinhloko ngokuvimbela ukugayeka nokumuncwa kwamafutha adlayo.
Kanjani Cetilistat uphatha ukukhuluphala?
Ukukhuluphala ngokweqile kungenye yezinkinga zezempilo zomphakathi ezivame kakhulu emhlabeni namuhla. Kuyinkinga eyinkimbinkimbi, engapheli kanye ne-multifactor ebonakala ngokuqongelela kwezicubu zamafutha / ze-adipose ezeqile.
Ukukhuluphala kuhlotshaniswa nokuphazamiseka kwempilo okunjengesifo sikashukela sohlobo 2, umfutho wegazi ophakeme, i-hyperlipidemia, i-cholesterol ephezulu, ezinye izinhlobo zomdlavuza, kanye nesifo esithile senhliziyo esifana nesifo sohlangothi nesokushaya kwenhliziyo.
Ukukhuluphala emazweni amaningi kufinyelele ezingeni lomqedazwe yingakho kukhathazeka ngempilo emhlabeni wonke.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukulahleka kwesisindo okuqhubekayo kuka-5 kuya ku-10% wesisindo sakho sokuqala somzimba kunganciphisa kakhulu ukuphazamiseka okuhlobene nokukhuluphala komzimba.
I-Cetilistat ibhekwa njenge-anti-obesity agent. Ama-anti-obesity agents ngokuvamile akhulisa ukusetshenziswa kwamandla kagesi ngaleyo ndlela anciphise isisindo ngemithethonqubo ye-neural ne-metabolic.
I-Cetilistat iyi-gastrointestinal pancreatic lipase inhibitor eyi-agent esebenzayo yokulwa nokukhuluphala ezifundweni zabantu.
I-Cetilistat iyasebenza ngokuvimba ukugayeka nokumuncwa kwamafutha ngaphakathi kokudla okudlayo. Lapho amafutha engagayeki akhishwa endleni ngesikhathi sokuhamba kwamathumbu. Lokhu kufeza ngokuvimbela ama-enzyme lipases abhekele ukwephula i-triglycerides (amafutha / lipid emzimbeni) emathunjini.
The imiphumela ye-cetilistat ngakho-ke kuboniswa emgodini wamathumbu. Ngakho-ke kusho ukuthi i-cetilistat yehlukile kwamanye ama-anti-obesity agents anethonya ebuchosheni bakho ekunciphiseni ukuthanda ukudla ngoba kusebenza emaphethelweni.
Lapho ukugayeka nokumuncwa kwamafutha okudla kuvinjelwe, ukubekwa kwamafutha kunqunyelwe ngaleyo ndlela ukusetshenziswa kwamandla aphansi okuholela ekwehliseni isisindo.
Yize, iCetilistat izokusiza ukuthi wehlise isisindo somzimba kuphezu kwakho ukugcina ukudla okunomsoco onamafutha amancane okuhambisana nokuvivinya umzimba ukuze uphathe ukukhuluphala ngempumelelo.
Kokubili i-cetilistat ne-orlistat yimithi kadokotela esetshenziselwa ukwelapha ukukhuluphala. Babonisa indlela efanayo yokusebenza abathola ngayo ukuncipha komzimba.
I-Cetilistat ne-orlistat yizitho zesisu zamathumbu lipases inhibitor ezivimbela noma zinciphise ukugaya nokumunca amafutha adlayo. I-lipases ibhekene nokuwohloka kwe-triglycerides emathunjini. Amafutha angashintshiwe akhishwa ngokuhamba kwamathumbu endleni yomuntu. Lo msebenzi uqinisekisa ukuthi amafutha awangeni emzimbeni okuholela ekwehliseni isisindo.
Ukwehliswa kwesisindo okuphawulekayo kuye kwabikwa kuzo zombili i-cetilistat ne-orlistat. Impumelelo ye-cetilistat vs orlistat incike kwindlela yakho yokuphila njengoba ikudinga ukuthi unamathele ekudleni okunomsoco okunama-khalori aphansi okuhambisana nokuvivinya umzimba njalo.
I-Cetilistat kanye ne-orlistat ikhombisa ukulawulwa okuthuthukisiwe kwe-glycemic njengoba kufakazelwa ukuncipha okukhulu kwe-plasma glycosylated hemoglobin. Futhi banciphisa ubungozi bokuphazamiseka okuhlobene nokukhuluphala okufana nezifo zenhliziyo, umfutho wegazi ophakeme, amazinga aphezulu e-cholesterol, nohlobo lwesifo sikashukela sohlobo lwesibili.
Imiphumela emibi kakhulu ehlotshaniswa ne-cetilistat ne-orlistat yimiphumela yamathumbu ngokuvamile ngenxa yamafutha angashintshiwe. Kodwa-ke, uma uqhathanisa i-cetilistat vs orlistat ngokwemiphumela emibi, imiphumela emibi eminingi ihlotshaniswa ne-orlistat kune-cetilistat. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu bemiphumela buchazwa kakhulu nge-orlistat kune-cetilistat.
Uma kuqhathaniswa nokubekezelelana kwe-cetilistat vs orlistat, i-cetilistat ibikwe ukuthi ibekezeleleke kahle kune-orlistat.
Ucwaningo lwamasonto ayi-12 olubandakanya iziguli ezikhuluphele ezinesifo sikashukela sohlobo 2 lwenzelwa ukuhlola ukwehla kwesisindo, ukunciphisa i-hemoglobin ye-glycosylated, nokubekezelelana kwe-cetilistat uma kuqhathaniswa ne-orlistat. Ukwelashwa kwahlanganiswa nokudla okunamafutha okuphansi kuya kokulingene futhi isifo sikashukela siphethwe ukusebenzisa i-metformin.
Ucwaningo luthole ukuthi kokubili i-cetilistat ne-orlistat kwehlise kakhulu isisindo kanye nokulawulwa okuthuthukisiwe kwe-glycemic. Izidakamizwa ziphinde zehlisa ubungozi bokuphazamiseka kwenhliziyo ngokunciphisa ubukhulu bezinqe obuyinkomba yesifo senhliziyo.
Kulolu cwaningo, imiphumela emibi eye yabonwa kwakuyimiphumela yamathumbu eyayinama-orlistat amaningi, futhi nobunzima bemiphumela ehlobene ne-orlistat kwatholakala ukuthi iphakeme kunaleyo ye-cetilistat. Umehluko emiphumeleni ye-cetilistat vs orlistat kungabangelwa ukwehluka kwawo kwesakhiwo namakhemikhali.
Ukuhoxa ocwaningweni bekungenxa yemiphumela emibi futhi bekukhona kakhulu nge-orlistat kune-cetilistat. Ngaphezu kwalokho, i-cetilistat ibekezelelwe kakhulu kune-orlistat.
Ubani ongakwazi sebenzisa iCetilistat?
Ungakucabanga ukuthatha iCetilistat (282526-98-1) uma udinga ukunciphisa umzimba. Kodwa-ke, njenganoma imuphi omunye umuthi, thatha izinyathelo ezifanele ngenkathi uthatha lo muthi.
I-Cetilistat inconywa kubantu abane-body mass index (BMI) engaphezulu kuka-27. Kuyalulekwa futhi ukuthi uthathe i-cetilistat uma i-BMI yakho ingaphezulu kuka-27 futhi uhlushwa yizimo ezihambisana nokukhuluphala njengesifo sikashukela nomfutho wegazi ophezulu. I-BMI iyinkomba yamafutha omzimba abalwa ngokuhlukanisa isisindo sakho ngamakhilogremu ngesikwele sokuphakama ngamamitha.
Uma ukhethe ukuthatha i-cetilistat, qiniseka ukuthatha isilinganiso esinconyiwe se-cetilistat ngokudla kwakho. Umthamo obekiwe we-cetilistat uthathwa kahle uma udla, phakathi noma kuze kube yihora elilodwa ngemuva kokudla kwakho.
Isidakamizwa se-cetilistat sivela kumaphilisi noma ifomu lethebulethi lokuphathwa ngomlomo ngengilazi yamanzi. Ungase futhi uthole i-cetilistat powder. Umthamo we-cetilistat ofanele nobude besikhathi sokwelashwa kuzonqunywa ngumhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ngokuya ngesimo nempendulo yokuqala emithini.
Ukuncipha kwesisindo seCetilistat izinzuzo azikhonjisiwe ezinganeni, ngakho-ke akufanele uzinikeze lokhu izingane. Lokhu ikakhulukazi ngezingane lapho sezithomba njengoba i-cetilistat ingathonya ukukhula kwazo kanjalo nokuphakama.
ICetilistat ibhekwa njengengaphephile komama abakhulelwe noma abesifazane abazama ukukhulelwa. Kungaba yingozi enganeni engakazalwa.
Omama abancelisayo nabo bayelulekwa ukuthi bagweme i-cetilistat ngoba ingadlulela enganeni.
Udokotela wakho angakweluleka ukuthi uthathe noma ugweme i-cetilistat ngenxa yezimo ezithile zezempilo ezifana ne-hypersensitivity, cholestasis (isifo sesibindi), kanye ne-malabsorption syndrome engapheli.
Imiphumela emibi yeCetilistat
I-Cetilistat powder ibhekwa njengephephile kepha uma weqa umthamo we-cetilistat onconyiwe noma wehluleka ukulandela imiyalo uhlangabezana neminye imiphumela emibi ye-cetilistat. Le miphumela emibi ingavela ekuqaleni kepha imnene futhi kufanele iqhubeke nokusetshenziswa okuqhubekayo komuthi. Uma zingahambi, kufanele uxhumane nodokotela wakho.
Imiphumela emibi kakhulu ye-cetilistat yilena;
Ukunyakaza okuphuthumayo nokuvamile okungahle kube nzima ukulawula
Izitulo ezinamafutha noma ezinamafutha
Eminye imiphumela emibi engajwayelekile kodwa ebucayi kakhulu ye-cetilistat nayo ingavela. Kufanele uxhumane nodokotela wakho ngokushesha lapho ubona imiphumela emibi elandelayo;
I-jaundice (ukuphuzi kwamehlo noma umzimba wonke)
Inzuzo yeCetilistat yokulahlekelwa isisindo ekuphathweni kokukhuluphala ukusetshenziswa okuyinhloko okuyaziwa ngakho. Kukhona ezinye izinzuzo ze-cetilistat ezenza zihluke futhi zigqame phakathi kwezinye izidakamizwa zokwehlisa isisindo.
Ngezansi kunezinye izinzuzo ze-cetilistat;
Kukusiza ugcine impilo enempilo ngokuncipha
ICetilistat ingenye yezidakamizwa ezinkulu zokwehlisa isisindo kanye ne-anti-obesity agent. Empilweni yakho ejwayelekile ukuthola isisindo eseqile kuholela ekwandeni kosayizi namafutha omzimba okuvame ukubizwa ngokuthi ukhuluphele ngokweqile noma ukhuluphele. Lezi zimo zombili zihlotshaniswa nezinkinga zezempilo ezifana nohlobo 2 lwesifo sikashukela, isifo senhliziyo esifana nokushaywa unhlangothi, umfutho wegazi ophakeme, kanye nomdlavuza othile ofana nomdlavuza wekoloni nowebele.
Umehluko phakathi kwabantu abakhuluphele nabakhuluphele ngokweqile yinkomba yomzimba (BMI). Umuntu uthathwa njengokhuluphele ngokweqile lapho i-BMI inkulu noma ilingana nama-25 ngenkathi umuntu okhuluphele ene-BMI enkulu ukwedlula noma elingana no-30.
Ukuthatha i-cetilistat kuzosiza umzimba wakho ukuthi wehlise ukuqoqwa kwamafutha ngaleyo ndlela ugcine i-BMI enempilo futhi ngenxa yalokho ube nempilo enempilo. Lokhu kunjalo ngoba kwehlisa amathuba ezimweni ezisongela impilo ezihambisana nokukhuluphala.
Isiza ekwehliseni isisindo nasekunciphiseni i-hemoglobin ye-glycosylated ezigulini zesifo sikashukela esikhuluphele
Isifo sikashukela kanye nohlobo 2 lukashukela olubizwa nangokuthi isifo sikashukela mellitus yisifo esivamile ezigulini ezikhuluphele. Uhlobo lwesibili sikashukela lwenzeka lapho amangqamuzana omzimba emelana nomphumela ofanele we-insulin, okuwukuqondisa ushukela wegazi kumaseli. Lokhu kuholela ekuqongeleleni kwe-glucose egazini. ukukhuluphala ngokweqile kwaziwa ukuthi kukhulisa kakhulu ukutholakala kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2.
I-hemoglobin eglycosylated (i-hemoglobin lapho i-glucose ibopha khona) iyindlela yokulawula isifo sikashukela sesikhathi eside. Izinga le-hemoglobin ye-glycosylated (HbA1c) likhombisa isilinganiso seglucose egazini ezinyangeni ezintathu ezedlule. Izinga le-hemoglobin elijwayelekile le-glycosylated lingu-7% kepha iningi labantu abanesifo sikashukela bangazuza kuphela ngo-9%.
Esontweni lama-12, elenziwa ngokungahleliwe, lokuhlolwa komtholampilo ngokulawulwa kwe-placebo, iziguli ezikhuluphele ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zinikezwe i-cetilistat (40, 80, noma 120mg kathathu nsuku zonke). Bekufanele futhi banamathele ekudleni kwe-hypocaloric. ICetilistat kwatholakala ukuthi yehlisa kakhulu isisindo futhi yehlise ne-glycosylated hemoglobin (HbA1c). Kuphawulwe nokuthi i-cetilistat ibekezeleleke kahle.
I-Cetilistat ibekezeleleke kahle
Ngaphandle kokusebenza kwayo ekunciphiseni isisindo nasekulawuleni ukukhuluphala, kukhona okuningi kukho. I-Cetilistat ibekezeleleka kahle emzimbeni ngemiphumela engemihle kuya kokumaphakathi ephathekayo futhi enganyamalala ngokuqhubeka kokusebenzisa i-cetilistat.
Yize iningi lethu lisebenza ngempumelelo emithini yokwelashwa, kuhle futhi ukubheka umuthi obekezelelekayo emzimbeni wakho.
Esigabeni 2 kwenziwa ucwaningo lomtholampilo amasonto ayi-12 kusetshenziswa i-cetilistat kanye ne-orlistat evame ukutholakala. Izidakamizwa ezimbili zokwehlisa isisindo kutholakale ukuthi ziyasebenza ekwehliseni isisindo, ukunciphisa i-hemoglobin ye-glycosylated kanye nokunciphisa uzungezo lwesinqe. Futhi, i-cetilisat itholwe ukuthi ibekezeleleke kahle kune-orlistat, enemiphumela emibi embalwa futhi ebucayi ehlotshaniswa ne-cetilistat.
Ikusiza ukuthi ufeze izinhloso zakho esikhathini esifushane
Ukwehla kwesisindo kuyinjongo yesikhathi esifushane engatholakala ngokushintsha kokudla futhi kuhambisane nokuvivinya umzimba njalo. Kodwa-ke, ukugcina isisindo esinempilo kuyinjongo yesikhathi eside.
Udokotela wakho angancoma umuthi kadokotela okwehlisa isisindo somzimba lapho indlela yokuphila enempilo (ukudla nokuzivocavoca umzimba) ingakufinyeleli ukulahlekelwa kwesisindo okuhlosiwe. I-Cetilistat ingenye yemithi engasetshenziswa kanye nokudla okunamafutha amancane nokuvivinya umzimba njalo. Ngokungafani nezinye izidakamizwa zokulwa nokukhuluphala ezithatha isikhathi eside ukufeza ukuncipha okukhulu kwesisindo, i-cetilistat ithatha cishe amasonto ayi-12 ukunikeza isisindo osifunayo.
Kungasiza ukwehlisa izinga lakho le-cholesterol
I-cholesterol isho into eketshezi. Kuyadingeka emzimbeni wakho ukwakha amaseli noma kunjalo, okuningi kakhulu kungadala izingqinamba emzimbeni.
I-cholesterol yenziwa isibindi ngenkathi ezinye zivela ekudleni okudlayo njengenyama, izinkukhu, nemikhiqizo yobisi egcwele. Kunezinhlobo ezi-2 ze-cholesterol. I-cholesterol esezingeni eliphansi ye-lipoprotein (LDL) noma i-cholesterol "embi" kanye ne-high-density lipoprotein noma "cholesterol enhle". I-LDL ineqhaza ekwakheni okunamafutha emithanjeni yegazi yingakho kwandisa ubungozi bezifo zenhliziyo njengokushaywa unhlangothi nokuhlaselwa yinhliziyo.
Ukukhuluphala kukhulisa ingozi yakho yamazinga aphezulu we-cholesterol. Ukukhuluphala kwandisa inani le-cholesterol ye-LDL ngokuguqula impendulo yomzimba wakho kumafutha owadlayo. Ukuvuvukala okubangelwa ukukhuluphala futhi kunciphisa ukuphendula komzimba wakho kuzinguquko ekudleni kokudla okunamafutha. Ngaphezu kwalokho, ukumelana ne-insulin kuvamile nasezigulini ezinokukhuluphala. Lokhu kuthinta nenqubo ejwayelekile yamafutha emzimbeni wakho.
I-Cetilistat inganciphisa inani eliphelele le-cholesterol kanye ne-cholesterol ye-LDL.
Ocwaningweni olubandakanya amagundane, i-cetilistat ephethwe ngomlomo itholwe ukuqinisa ukukhuluphala kanye ne-cholesterol ephelele.
Yehlisa ubungozi besifo senhliziyo
Isifo senhliziyo siyigama elihlangene elibhekise ezinkingeni ezithinta inhliziyo noma imithambo yegazi. Isifo senhliziyo sifaka izifo zemithambo yenhliziyo njengokuhlasela kwenhliziyo ne-angina, isifo sohlangothi, ukwehluleka kwenhliziyo, nesifo senhliziyo i-rheumatic phakathi kwabanye.
Imbangela yesifo senhliziyo nemithambo yegazi iyahlukahluka kuye ngesifo esithile. Isibonelo, isifo se-artery coronary, stroke, kanye ne-periphery artery disease kungabangelwa umfutho wegazi ophakeme, uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2, ukubhema, ukungazivocavoci umzimba, ukukhuluphala ngokweqile nokudla okungafanele. Ukukhuluphala kulinganiselwa ukuthi kubalwa cishe i-5% yesifo senhliziyo.
I-Cetilistat, ngakho-ke, inciphisa ubungozi besifo senhliziyo ngokwelapha ukukhuluphala nokukhuthaza ukudla okunempilo okudlala indima ekuvimbeleni ukuvela kokuphazamiseka kwenhliziyo.
Esontweni eli-12 elenziwe ngokungahleliwe, eliyimpumputhe eliphindwe kabili elibandakanya iziguli ezikhuluphele ezinesifo sikashukela, i-cetilistat yanikezwa ngama-40, 80, noma ama-120 mg kathathu nsuku zonke. Abahlanganyeli baphinde belulekwa ukuthi bagcine ukudla okunamafutha amancane ngesikhathi sokufunda.
Lolu cwaningo lubike ukwehliswa okukhulu kwesisindo kanye nokwenza ngcono ukulawulwa kwe-glycemic. Ngaphezu kwalokho, kube nokuncipha okukhulu kokuzungezwa okhalweni okuyisinye sezici eziyingozi esifweni senhliziyo nemithambo yegazi.
Kunganciphisa umfutho wegazi
Umfutho wegazi ophakeme obizwa nangokuthi umfutho wegazi ophakeme yisimo lapho amandla egazi abhekene nezindonga zemithambo ahlala ephakeme ngesikhathi esithile. Umfutho wegazi ophezulu uyingozi njengoba uphoqa inhliziyo ukuthi isebenze kanzima iholele ekuqineni kwemithambo.
Umfutho wegazi ophezulu uhlotshaniswa nezinye izifo ezisongela impilo ezifana nohlangothi, isifo sezinso nesibindi phakathi kokunye.
Ukhuluphele ngokweqile noma ukhuluphele kukhulisa amathuba akho okuba nomfutho wegazi ophakeme. Umfutho wegazi lakho uyakhuphuka ngokwanda kwesisindo.
Ngakho-ke, kusho ukuthi ukwehlisa isisindo kungenye yezindlela zokwehlisa umfutho wegazi. Yilapho i-cetilistat ingena khona ngoba iholela ekulahlekelweni kwesisindo okukhulu ngesikhathi esifushane.
Ngingaphi thenga iCetilistat?
Uma ucabanga ukusebenzisa i-cetilistat thenga ku-inthanethi ngokunethezeka kwekhaya lakho. I-Cetilistat powder iyatholakala online kubaphakeli be-cetilistat noma abakhiqizi be-cetilistat izitolo. I-CMOAPI ingomunye wabakhiqizi be-cetilistat abathengisa imikhiqizo esezingeni eliphezulu enamakhasimende amahle kakhulu.
Lapho uthenga i-cetilistat powder noma amanye amaphilisi e-cetilistat kusuka I-CMOAPI noma abanye abahlinzeki be-cetilistat bahlole ngokucophelela amalebula ukuthi asetshenziswe kahle yini umuthi. Cabanga ngomthamo we-cetilistat onconyiwe njengoba uqondiswe ngumenzi we-cetilistat kodwa futhi ulandele izincomo zomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
Ukufunda cetilistat ukubuyekezwa kokuhlangenwe nakho komuntu siqu kungakusiza ukuba uqonde kangcono ukusebenza kwayo kanye nokuphepha. Amakhasimende amaningi e-cetilistat athenga ku-inthanethi futhi angashiya ukubuyekezwa kwe-cetilistat ngokuya ngokuhlangenwe nakho kwabo siqu.
Intengo yeCetilistat kubhekwa futhi lapho ufuna ukuyithenga. I-CMOAPI ingomunye wabahlinzeki be-cetilistat okungenzeka ukuthi banikela ngentengo yokuncintisana yama-cetilistat. Kodwa-ke, izintengo ze-cetilistat akumele zikwenze ungaboni ukuthi ukhethe umkhiqizo wekhwalithi empofu.
Ukuthenga ngokunethezeka ekhaya lakho kungaba yisilingo sokuthenga ngokushesha, noma kunjalo, kusadingeka wenze amalungiselelo afanele okwazi ukutholakala kwemithi oyidingayo ngaphambi kwesikhathi.
UBryson, A., de la Motte, S., & Dunk, C. (2009). Ukwehliswa kokumunca amafutha ekudleni yi-novel gastrointestinal lipase inhibitor cetilistat kuma volontiya anempilo. Ijenali yaseBrithani yemithi yokwelapha, 67(3), 309–315. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2008.03311.x.
IHainer V. (2014). Sibutsetelo semithi emisha yokulwa negciwane. Umbono wochwepheshe on Pharmacotherapy, 15(14), 1975–1978. https://doi.org/10.1517/14656566.2014.946904.
Kopelman, P., Groot, G., Rissanen, A., Rossner, S., Toubro, S., Palmer, R., Hallam, R., Bryson, A., & Hickling, RI (2010). Ukwehla kwesisindo, ukunciphisa i-HbA1c, nokubekezelelana kwe-cetilistat esivivinyweni esilawulwa ngokungahleliwe, esigabeni se-2 kubantu abanesifo sikashukela abakhuluphele: ukuqhathanisa ne-orlistat (Xenical). Ukukhuluphala (iSiliva Spring, Md.), 18(1), 108–115. https://doi.org/10.1038/oby.2009.155.
Kopelman, P; UBryson, A; IHickling, R; URissanen, A; URossner, uS; I-Toubro, S; UValensi, P (2007). "I-Cetilistat (ATL-962), i-lipase inhibitor yenoveli: Ucwaningo olulawulwa nge-placebo olulawulwa nge-placebo lokunciphisa isisindo seziguli ezikhuluphele kakhulu". Ijenali Yomhlaba Wonke Yokukhuluphala. 12 (31): 3–494. i-doi: 9 / sj.ijo.10.1038. I-PMID 0803446.
UPadwal, R (2008). "I-Cetilistat, i-lipase inhibitor entsha yokwelapha ukukhuluphala". Umbono Wamanje Ezidakamizweni Zokuphenya. 9 (4): 414– PMID 18393108.
U-Yamada Y, uKato T, u-Ogino H, u-Ashina S, uKato K (2008). "I-Cetilistat (i-ATL-962), i-pancreatic lipase inhibitor yenoveli, yenza ngcono isisindo somzimba futhi ithuthukise amaphrofayili e-lipid kumagundane". Ucwaningo lweHormone neMetabolic. 40 (8): 539– doi: 10.1055 / s-2008-1076699. I-PMID 18500680. I-S2CID 29076657.